Hoggaamiyaha Kuuriyada Koonfureed oo dalbaday in dagaal laga baaqsado - BBC News Somali
Hoggaamiyaha Kuuriyada Koonfureed oo dalbaday in dagaal laga baaqsado
Image caption Gaanshaanle sare Joseph Dunford oo bidix ka muuqda ayaa la kulmay Madaxweyne Moon intii uu gudo jiray safarkii uu ku marayay gobolka
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa dalka ay xualafada yihiin ee Maraykanka ugu baaqay in uu ka hortago in uu dagaal dhaco, iyadoo bartanka lagaga jiro xaaladda sii xumaanaysa ee ku saabsab halista hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi.
Moon ayaa saraakiisha milatariga Maraykanka u sheegay in ay waajibtahay in xal dublamaasiyadeed lagu xaliyo dhibaatada.
Gaanshaanle sare Joseph Dunford ayaa sheegay in ahmiyadda Maraykanku ay tahay in arrinta dublamaasiyad lagu xaliyo, laakiin wuxuu intaas ku daray in la diyaariyay tallaabo milatari haddii ay waxba qaban waydo cunaqabataynada cusub ee lagu soo ragay Kuuriyada Waqooyi.
Kuuriyada Waqooyi ayaa dhankeeda sheegtay Isniintii in dagaalkasta oo lagu qaado ay kaga jawaabi doonto mid Nukliyeer ah.
Maxay Kuuriyada Waqooyi ugu hanjabtay jasiiradda Guan ee Maraykanka?
Dhanka kalana wasaaradda ganacsiga ee Shiinaha ayaa amartay in si wayn loo xakameeyo waxyaabaha laga soo dhoofiyo Kuuriyada Waqooyi, arrintaas oo waafaqsan cunaqabataynadii dheeriga ahaa ee ay Qarammada Midoobay ku dhawaaqday horrtaantii bishan.
Cunaqabataynadan ayaa jawaab u ahaa gantaallo badan oo ay tijaabisay Kuuriyada Waqooyi.